HomeWararka CiyaarahaManchester United oo dooneysa inay iska iibiso Anthony Martial xagaagan.
Manchester United ayaa lagu soo waramayaa inay qorsheyneyso inay iska iibiso Anthony Martial inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan, iyadoo kooxda Tottenham Hotspur la rumeysan yahay inay xiiseyneyso adeegiisa.
25 jirkaan ayaa dhaliyay 78 gool, waxaana uu diiwaangaliyay 50 kale 258 kulan oo uu u saftay kooxda 20 jeer heysata horyaalka Ingariiska tan iyo markii uu ka yimid Monaco 2015.
Martial ayaa ku dhibtooday inuu awoodiisa ​​muujiyo intii lagu jiray ololihii 2020-21, in kasta oo uu dhaliyay kaliya 7 gool 36 kulan oo uu ciyaaray, wuxuuna seegay dhamaadka xilli ciyaareedka dhaawac jilibka ah.
Sida laga soo xigtay Daily Star , madama ay lacag badan kula soo wareegtay Jadon Sancho , Red Devils ayaa haatan dooneysa inay dirto Martial si kor loogu qaado miisaaniyadooda suuqa kala iibsiga.
Warbixinta ayaa sheeganeysa in Tottenham ay xiiseyneyso inay la mid noqoto qiimaha Man United ay ku dooneyso 50 milyan ginni, inkastoo ciyaaryahanka reer France mushaharkiisa 250 kun ginni isbuucii ay noqoneyso arin ku saabsan kooxda ka dhisan Waqooyiga London.
Martial, oo haatan ku tababaranaya xarunta kooxdiisa ee Carrington isagoo dhisaya taam ahaanshihiisa ka hor xilli ciyaareedka cusub, weli seddex sano ayaa uga harsan inuu qandaraaskiisa kula sii joogo kooxda Ole Gunnar Solskjaer .